Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Isitofu esitsha sesiZukulwana esilandelayo se-COVID-19
Eli qela libhalise abathathi-nxaxheba abangama-25 abaneminyaka eli-18 ukuya kuma-55 ubudala. Kulingo, i-SARS-Cov-2-neutralizing antibody geometric mean titers (GMTs) yaguqulelwa ekubeni yi-WHO/NIBSC iyunithi ye-IU/mL ukuze kuthelekiswe ii-antibody titers kunye nezo zezinye izitofu ezisetyenziswa ngokubanzi. I-Recbio ifumene i-GMTs ye-1643.2 IU/mL yokunciphisa izilwa-buhlungu kwiintsuku ezili-14 emva kweedosi ezimbini ze-ReCOV, kunye nezinga le-seropositive (SPR) kunye nesantya se-seroconversion (SCR) njenge-100%, ecebisa ukusebenza okuthembisayo kwe-ReCOV ekuthinteleni i-SARS-COV-2. izifo ezithathelwanayo. Izilwa-buhlungu ze-SARS-CoV-2 zenziwa yilabhoratri esembindini yophononongo (360Biolabs). Ngokophononongo lwakutsha nje loshicilelo1, i-GMT ye-SARSCoV-2 yokungathathi hlangothi izithinteli-zifo yayiyi-1404.16 IU/mL kunye ne-928.75 IU/mL kwiintsuku ezili-14 emva kweedosi ezimbini zezitofu zokugonya zeModerna kunye ne-BioNTech/Pfizer mRNA, ngokulandelelanayo.
I-ReCOV yayinyamezeleke ngokubanzi ngokhuseleko olulungileyo kunye neprofayili enyamezelekayo. Uninzi lweziganeko ezimbi zazinobunzulu obuncinane. Ayikho i-SAE okanye i-TEAE ekhokelela ekuyekweni kwangoko, akukho zimpawu zibalulekileyo ezingaqhelekanga/ziphumo zovavanyo lwaselabhoratri ezinokubaluleka kwezonyango.
I-Recbio iphuhlise amaqonga etekhnoloji amathathu aphambili kuphuhliso lwenoveli ye-adjuvant, ubunjineli beprotheyini kunye novavanyo lwe-immunoloji. Ixhaswa ngala maqonga, i-Recbio iyaqhubeka ifumanisa kwaye iphuhlisa uluhlu olupheleleyo lwabagqatswa bogonyo, abafana nesizukulwana esilandelayo se-HPV, ishingles kunye nogonyo loMkhuhlane.
Rasta mann uthi:
Novemba 12, 2021 kwi-15: 39
Awuyi kucinga ukuba inqaku lakho linika ithemba kangakanani kubantu abafana nam nelizwe lam, elikwelinye icala lehlabathi. Silahlekelwe lithemba ngokupheleleyo malunga nokuba siza kuphuma etoneleni malunga nobhubhani we-Covid. Linda maam, awukho ngaphantsi kwesithunywa sikaThixo. UThixo ugcina wena, usapho lwakho kunye nelizwe lakho nikhuselekile.